Telegram efa mamela antsika hamafa hafatra nalefa | Vaovao IPhone
Telegram dia efa mamela antsika hamafa ireo hafatra nalefa
Ny sehatry ny fandefasan-kafatra izay be mpitia indrindra eo amin'ny mpampiasa, Telegram, dia mitohy ho toeram-piterahana izay matetika i WhatsApp, eo am-pelatanan'ny Facebook, dia ara-tsindrimandry nefa tsy dia mahazatra loatra, satria natokana ho an'ny fampiharana Facebook ihany ny milina fanaovana kopia sy paty. Mihamaro ny mpampiasa mandray ny Telegram ho iray amin'ireo mailaka fandefasan-kafatra tiany indrindra misaotra ny fahafaha-mizara GIF, mizara karazana rakitra rehetra, fampifanarahana eo amin'ireo fitaovana rehetra apetraka ny rindranasa (izay multiplatform) ... Raha mbola tsy nanandrana azy ianao dia manome antony iray hafa ireo tovolahy ao amin'ny Telegram hanaovana izany: afaka mamafa ny hafatra alefa amin'ny vondrona na amin'ny olona.
Azo antoka fa imbetsaka tamin'ny fotoana iray no nanodinkodinanao nanoratra zavatra izay tsy nolanjainao, na nanao hadisoana tsipelina diso ianao, na tsy hitanao fa tsotra ny hevitrao. Amin'ireto tranga ireto, ny fanehoan-kevitra matetika matetika dia ny tany mitelina ahy. Saingy amin'ny fanavaozana Telegram isa 3.16, azontsika atao ihany ny mamafa ny hafatra alefa mitokana na miaraka amin'ny vondrona, esory izy ireo mba hanjavona tsy ho hitan'ny mpampiasa rehetra na ho hitanay fotsiny. Mazava ho azy, 48 ora no fotoana anaovana azy.
Volana vitsivitsy lasa izay, namela anay hankafy horonan-tsary YouTube tamin'ny alàlan'ny fiasa Picture-in-Picture ilay rindranasa fiasa izay misy ihany koa ho an'ireo horonantsary aseho amin'ny pejy hafa, tsy amin'ny YouTube ihany. Ho fanampin'izany, afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiasana ny taham-data na ny fifandraisana Wi-Fi izay ataontsika miaraka amin'ilay fampiharana izahay, hijerena amin'ny fotoana rehetra hoe inona ny fifamoivoizana Telegram ary raha tsy maintsy manomboka mieritreritra ny fanovana ireo fikirana izahay ka tsy ny atiny rehetra nalefa taminay no alaina ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Telegram dia efa mamela antsika hamafa ireo hafatra nalefa
Deibris Aguilera dia hoy izy:
Aiza no ahafahako mamaky bebe kokoa momba ny Telegram?
Valiny tamin'i Deibris Aguilera
Ao amin'ny famaritana ny fampiharana na amin'ny tranokala https://telegram.org
Android no OS mora tohina indrindra tamin'ny 2016
Mihidy koa ny fivarotana Selfridges any Londres, natokana ho an'ny Apple Watch